ရန်ကုန်မြို့တွင်းတွင် သာမက နေရာအနှံ့ လမ်းဘေးဈေးသည်များအား စီမံချက်ချ လိုက်လံရှင်းလင်းနေ၊ ယာဉ်အသွားအလာနှင့် လမ်းသွားလမ်းလာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော အဓိကနေရာများကိုသာ ရှင်းလင်းသင့်ပြီး အချိန်အပိုင်းအခြားဖြင့် စနစ်တကျ ဖွင့်လှစ်ရောင်းချနိုင်ရန် ကြပ်မတ်ပေးသင့် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ﻿ ရန်ကုန်မြို့တွင်းတွင် သာမက နေရာအနှံ့ လမ်းဘေးဈေးသည်များအား စီမံချက်ချ လိုက်လံရှင်းလင်းနေ၊ ယာဉ်အသွားအလာနှင့် လမ်းသွားလမ်းလာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော အဓိကနေရာများကိုသာ ရှင်းလင်းသင့်ပြီး အချိန်အပိုင်းအခြားဖြင့် စနစ်တကျ ဖွင့်လှစ်ရောင်းချနိုင်ရန် ကြပ်မတ်ပေးသင့်
﻿ ရန်ကုန်မြို့တွင်းတွင် သာမက နေရာအနှံ့ လမ်းဘေးဈေးသည်များအား စီမံချက်ချ လိုက်လံရှင်းလင်းနေ၊ ယာဉ်အသွားအလာနှင့် လမ်းသွားလမ်းလာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော အဓိကနေရာများကိုသာ ရှင်းလင်းသင့်ပြီး အချိန်အပိုင်းအခြားဖြင့် စနစ်တကျ ဖွင့်လှစ်ရောင်းချနိုင်ရန် ကြပ်မတ်ပေးသင့်
Posted by ဦးကောက် on Jun 12, 2011 in Copy/Paste |2comments
Myanmar popular singer Wine Su Khine Thein believes that her swimwear fashion photos leaked onto the Internet could happen nothing to her. Wine Su said 8 Days Journal that “I don’t know how my photos in swimwear were spread out on internet. I visited Pattaya Beach, Thailand last two years ago together with other artists and parents asaprivate group trip. There were many Burmese people on the Beach at that time and they followed us and shot photos. The person who uploaded these photos online might beajobless as if he has all the time at his disposal. I wore swimsuit to swim and play around on the beach. I wore it asaDress. However, these photos could effect nothing to me at all whether or not somebody like these photos and uploaded on internet.”
myanmarcelebrity.com မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
သူ့ဖာသာသူ နေပါစေဗျာ။ ဘာပြုလို့ သွားပြီး ရှင်းလင်းကြပ်မတ် ရမှာတုံး။ အားအားရှိ ဝိုင်းလေးကိုပဲ လိုက်ဝိုင်းနေကြတာ၊ နှာဗူးဒွေ…
ဟဟ အပြင်တန်းမှာ ရှင်းလိုက်လို့ထင်တယ်။ ၃၈ လမ်းထဲ ဈေးသည်တွေရောက်သွားတော့ လမ်းလည်း ကြပ်ညပ်ပြီး ကားတွေနဲ့ရှုပ်နေတယ်။ ဘာထူးခြားပါသလဲ။